Abbaa Irree Ministera Muummee Kan Rifachiise Dargaggoon Beekaa Rasaasa Siyaasaa Dhukaase Sulxaan Qaasim! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAbbaa Irree Ministera Muummee Kan Rifachiise Dargaggoon Beekaa Rasaasa Siyaasaa Dhukaase Sulxaan Qaasim!
Abbaa Irree Ministera Muummee Kan Rifachiise Dargaggoon Beekaa Rasaasa Siyaasaa Dhukaase Sulxaan Qaasim!
Har’a fulbaana 16-2020 ዛሬ መስከረም 5 2013 ዓ.ም Walgahiin marii biyyooleessaa baanamu kan waajjira abbaa irree Muummee Ministeraatti geggeeffamee ture. Ajanadaa ijoon dhimma marsaa lamaan darbaniin walgahii waltahiinsa biyyoolessaa marii geggeeffamaniin abbaan irree Muummee Ministeraa bakka argamnii geggeessame gamaaggamuun ture. Walitti qabaan mana maree paartiilee Obboo Muusaa Aadam walgahiileen darbaniin waliigaltee olaanoodhaan gal goolabamanii fi yaalii gaariin kan irraa argaman tahuu ibsanii dhimma murtaahoo tarrifamn irratti gabaasaa dhiheessan. Barreessaa mana marichaa fi itti aanaan walitti qabaan wal duraa duubaan yaadoota hafan jedhan irratti dabaluun dubbatan. Itti fufuun gabaasaarratti yaadni yoo jiraate manichaaf carraan yeroo kennamu akkauma baratame geggeessitootni paartiilee deeggarsaa fi dhaadheffannaa dhiheessan. Tokkoon isaaniiyyuu hidhaa fi ajjeechaa biyyattii keessatti geggeeffamaa jiru akkaaumas hiraarsaa raawwatame kan ija jabaatee dubbate hin turre.
Dargaggeesa magaala kan hedduu hin beekamne tokko harka baasee erga carraan kennameef booda ”ani Sulxaan Qaasimiin jedhama. Dura taa’aa paartii Dimokraasii Gamtaa Oromoo (Odaa)” jechuun of beeksisee booda waan Ministerri Muummee hin eegnee fi dhagahuu hin feene onnatee gaafii dhangalaasuu qabe. “Kabajamoo ministera muummee! ajjeechaa garmalee weellisaa Haacaaluun walqabatee Oromiyaa keessatti dhibbootaan kana lakkaahaman hidhattoota mootummaatiin lammiileen nagaa ajjeefamanii jiru, kumoota 10n kan tahan daraggootnii fi lammiileen qulqulluun hidhamanii jiru, paartiileen mormituun ijoo jedhaman geggeessitootni kanneen dhageettii olaanaa ummata biraa qaban, kanneen dhiibbaa siyaasaa biyyattii keessatti uumuu dandahan hoogganootni hidhamii jiru, kunneen idhamtoota siyaasaa tahuu isaanii ni beekna” haala dirreen dimokraasii ukkaamame kana keessatti akkamitti akkamitti waltahiinsa biyyoolessaa jedhamee yaadamaa?, hangam tokko bu’a qabeesaa tahas?” Jedhuun kan hunduu dubbatchuu sodaatan dhoose.
Muummeen Ministeraa gidduun seenanii “maal jechuu barbaaddeetii? Namootni beekamti qaban kan jette maal isaani?” jechuun gaafate. Dargaggoon kunis “Oromiyaatti kan hidhaman 1/3 kan tahaniyyuu mana murtiitti hin dhihaanne፣ manneen hidhaa dhaabbatoon guutanii manneen barnootaa sababaa koronaatiin cufaman mana hidhaa tahanii jiru, kana keessatti dhukkubaaf haala yaaddoo taheen hidhamanii jiru, mana murtii dhihaatanii abbaan alangaa ragaa argachuu dhabee himata irratti banuu hanqate manni murtii wabiidhaan akka bahan kan murteesse poolisiin aangoo isaatiin ajaja mana murtii tuffatee hin hiiku, maalis hin hiikaman? Jedhamanii yoo gaafataman hanga qaama oliirraa ajajni dhufu, qajeelfamni addaa hnga dhufu jechuun osoo hin hiikamin tursiisu. Haala ajajni mana murtii hin kabajamne keessatti akkamitti olaantummaan seeraa fi mirga kabajchiisuun kan dandahamu? … .”
Jedhee yeroo gaafatee yemmuu itti fufuuf turetti miniserri muummee aariidhaan sagalee guddistuu erga irraa cufee booda “hamee gandaa qabattanii erga as dhuftanii፣ isin maal waan taataniifii? Paartii waan jedhamtaniif, isin waliin marihachuu waan barbaadneef malee ummatni bakka isin buufate hin jiru” xiyyeeffannaa miidiyaa argachuu yoo feetan waltajjii biraa barbaadaa, yeroo kaameeraa argitan hedduu waccu, barbaadchisaa yoo tahe miidiyaalee ni baasna, ajandaan har’aa waahee namoota hidhamanii miti, ajandaa isaa malee kaaste,. Jechuun aariin dubbatee gara nama biraatiif carraa kenne.
Mariin itti fufee yeroo itti aananitti qorannoon mata duree marii paartiileef dhihaatan yeroo filatamitti Dargaggoon kun harka yoo baases, “ati sila dubbattee jirta” jechuun carraa dhorkate. Dhumarratti nata dureen qorannoo 5 erga aggaammamanii booda kan jalqabaa filannoo kan ilaallatu fuuldura paariin ብልፅግና bakka bu’ummaan kan dhiheessu tahuu dubbatee mata dureewwan 4n hafaniif dhiheessitoota gara filachuu fi mijeessuutri dabarfatan. Muummeen ministeraa akkuma baratame mata duree kana osoo abalu dhiheessee hoo? inni odeessa saayinsii siyaasaati, isa kana immoo abalu muuxannoo bal’aa qaba jedhee ramada, kan mormu ykn kan yaada addaa qabu yoo jiraate jechaa matadureewwaniif dhiheessitoota ramadaa yaada addaa yoo jiraaye jechaa eenyuyyuu osoo haada hin kennatin calleensaan walii galuu isaanii ibsaa bira darbe.
Dhumarratti “Constitution and Constitutionalism” xoopiyaatti mata duree jedhu irratt ogeessi seeraa osoo dhiheessee gaariidha erga jedhee booda yaada isaa jijjiiree p/r Birajaanuu Naggaa yoo dhiheessee hoo?, yaada addaa kan qabu yoo jiraate? Jechuun hirmaattootaaf carraa kenne. Yeroo kana Dargaggeessi ogeessa siyaasaa harka baase, ministerri moommee carraa dhorkachuuf onnee hin arganne. “Dargaggoo shororkeessaa mee dubbadhu” jedheen. Dargaggoon beekaa siyaasaa kun jecha maqa balleessii fi jibbisiisaa kanaan osoo hin rifatin “Ani hayyuu seeraati, barataa PHD Constitution fi barsiisaa seeraati. Mata dureen filatame immoo constitution dha, constitution immoo dhimma murteessaa rakkoolee biyyattee hedduu kan ilaallatu waan taheef xiyyaafannaa barbaada, akkuma isin jettan ogeessi seeraa yoo dhiheesse wayya waan jettaniif of kaadhimuu koo waan biraatti osoo fudhatchuu baattanii fi manni yoo naa eeyyame mata duree kanarratti ani qo’annoo yoon dhiheesse jechuun dubbate.
M/M irraa fuudhanii ” ati dargaggeessa ogeessa seeraa, hayyuu constitution taatee oso jirtuutii nu gargaaruun osoo sirra jiruu dura olaantummaan seeraa kabajamuu jin qabu jettee mormaa turtee? mee challenge goona. Mata duree kana inni haa dhiheessuu. Kana dura siin beekuun ture. Maqaa kee eenyu jettee turtee? Jechuun gaafate. Dargagoonis “Sulxaan Qaasim” jechuun deebisee mata dureerratti qo’annoo dhiheessuuf walii gale. Namootni yaada biraa ykn mormiin waan hin dhihaatiniif dhimmichi kanaan goolabame.
Mariin itti fufee gara maayiirratti waahee namootni naannoo Oromiyaatti seeraan ala hidhaman yoo jiraatan dhimma keessan Dr/ Alamuu Simeef dhiheessuu ni dandeessu፣ Ani dhimma mana murtii keessa hin galu jechuun hubachiisa kenne. Kanumaan walgahichi goolabame.
Ani baroota dheeraa siyaasaa xoophiyaa keessa tureen jira garuu sodaa malee M/M ifatti waa’ee dhigaa kan mormu onnataa hanga tokko kan qubaan lakkaahaman qofa na muutanii jiru. Isaan keessaa dargaggeessi beekaa siyaasaa shororkeessaan kun isa tokko. Yeroo darbe hoogganaan dhaaba siyaasaa mormituu tokko. “nuti kan ijaaramne isin deeggaruufi” jechuun raajii nu jechiisse. Akkasitti immoo M/M nama haay jedhuun dhabe waahee sagalee Oromoota qulqulluu kan dubbatu namni siyaasaa onnataan ni jira. Jecha jibbisiisaa “Shororkeessaa” jedhu akeeka maaliif akka itti dhimma bahe beekuu baatdhus har’a dargaggoon hayyuun siyaasaa Sulxaan Qaasim M/M abbaa orree tahaa dhufe shororkeessee jira. Ija sirraa haa qabu, yeroo namni onnatee kan dhugaa dubba dhibetti waahee Oromoota qulqullee abbaa irree dura dhaabbattee mormuu keetiif si kabajeen jira.
Yaadannoo kana barreessuuf kan na kakaase miidiyaalee mootummaa waan dargaggeessi kun dubbate akka hin dhiheessine nan beeka. Akkumaanneegetti gabaasaa isaaniitiin kanneen harka dhahanii fi mootummaa deeggaran, yaada dhaadhessan qofa dabarsanii sagalee jabaa dargaggeessi kun dubbate kutanii hambisanii jiru. Yaadni akkasii miidiyaadhaan kutamanii Ummataaf osoo hin dhihaatin akka hin hafne gara keessaniin akka girra Ummataa gahu taasisaa.
Hirmaattootaa walgahichaa keessaa tokko
Yaa Abiyii ati bar dhalonii qubeetu ganaman si jibee mee of dhagefadhu
Ebbissa Addunya – Geerarsa
Ethiopia: “Haguma nu dhiiban, hirkoo jabaa tolfanna!”